Window Vista တွင် internet ကို မြန်ဆန်စွာ အသုံးနိုင်ရန်အတွက်
Window Vista တွင် internet ကို မြန်ဆန်စွာ အသုံးနိုင်ရန်အတွက် အောက်က နည်းကလေးက အထောက် အကူပြုနိုင်ပါလိမ့်မယ်
2. UAC prompt ပေါ်လာလျှင် Continue ကိုရွေးပေးပါ။
3. HKEY_CURRENT_USER\_Software\_Microsoft\_Windows\_CurrentVersion\_Internet Settings ကိုသွားပါ။
4. ညာဘက်ခြမ်းတွင် New ကိုရွေးပါ။ DWORD (32-bit) Value ကိုရွေးပေးပါ။
5. MaxConnec tionsPer1 _0Server ရိုက် Enter ခေါက်ပါ။ ၄င်း စာသားပေါ်တွင် Modify ကိုရွေးပေးပါ။
6. တန်ဖိုးကို 10 ပြောင်းပေးပါ။ OK နှိပ်ထွက်ပါ။
ပြီးရင်စက်ကို restart လုပ်ပြီးဝင်းဒိုးပြန်တက်လာပါက internet အသုံးပြုရာတွင်မြန်ဆန်လာတာကို
တွေ့ ရပါလိမ့်မယ် အဆင်ပြေကြပါစေဗျာ